Dental Implant အကြောင်း တစေ့တစောင်း | The Grand Dental
သွားတစ်ချောင်းနှုတ်လိုက်ရပြီးရင်၊ သွားဖုံးရိုးအနာကျက်လို့ သွားဖုံးသားပြည့်လာတာနဲ့ သွားပြန်အစားထိုးလို့ရပါတယ်။အကြမ်းအားဖြင့်၊ သွားနှုတ်ပြီး ၁ လလောက်အကြာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုသွားအစားထိုးတာကို၊ မြန်မာလိုနားလည်အောင် သွားစိုက်တယ်လို့ဘဲ လွယ်လွယ်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကုသမှုအရ၊ သွားဖုံးရိုးထဲ သတ္တုတိုင် (Dental Implant) စိုက်ထည့်ပြီး သွားပြန် အစားထိုး တာကိုမှ၊ သွားစိုက်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
Implant စိုက်ခြင်းကတော့ အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာမှာသုံးပြီး ခေတ်စားလာနေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖုံးရိုးထဲကို၊ Titanium သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Dental Implant စိုက်ထည့်ပြီး၊ အပေါ်ကကြွေသွားစိုက်တဲ့၊ သွားအသေစိုက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Titanium နဲ့ အရိုးသားက၊ တွဲဆက်သွားတဲ့အတွက် အရိုးမှာပြဿနာမဖြစ်မချင်းပြန်မပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အခြား သတ္ထုအရောအနှော ကင်းစင်သော Titanium Implant များကိုသာ အသုံးပြုမှာဖြစ်လို့ MRI scanning မှာ တစ်စုံတစ်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။
Dental Implant ၏အားသာချက်များမှာ
သဘာဝသွားနှင့် Implant ဖွဲ့စည်းပုံတူညီသဖြင့် သဘာဝသွားကဲ့သို့အသုံးပြု၍ ရခြင်း၊ သဘာဝသွားကဲ့သို့ခံစားရခြင်း စသည့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
သဘာဝသွားများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှုတ်လိုက်ရပါက ထိုနေရာရှိအရိုးများသည်အချိန်နှင့်အမျှ နိမ့်ဆင်းသွားကြပါသည်။ သွားအသေစွပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အံကပ်စိုက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အရိုး ဆုံးရှုံးမှုကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ အရိုးများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာ ထိုနေရာတွင် Implant စိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Implant သည် သဘာဝသွားအမြစ်ကဲ့သို့ အရိုးထဲတွင် တည်ရှိနေပြီး ထိုနေရာရှိအရိုးများအား တည်မြဲနေစေရန် ထိန်းထားပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် Dental Implant ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် သွားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွားမြစ်တု အစားထိုးကုသခြင်းဟာ သွားပြန်စိုက်ရန်အတွက် ဘေးသွားများကို စားပစ်ရန်မလိုတော့တာဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။ သဘာဝသွားများအတိုင်းအထိအတွေ့နှင့် ဝါးစားနိုင်စွမ်းကိုပါရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခု နောက်ဆုံးပေါ်သွားစိုက်ကုသနည်းဖြစ်သော Dental Implant Treatment ကို နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူစရာ မလိုတော့ဘဲ "The Grand Dental Implant Centre" တွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ 2D Digital X-Rays ဖြင့် ဓာတ်မှန်ရိုက် စစ်ဆေးပြီး Korea နိုင်ငံနှင့် Switzerland နိုင်ငံမှ Quality အကောင်းဆုံးသွားပစ္စည်းများ နှင့် သွားမြစ်တု အစားထိုး ကုပါရဂူကြီးများမှ ကုသမှုပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
FAQ (၁) Implant က ပြန်ပြုတ်တတ်ပါ သလား ?
ဖြေ- သွားဖုံးအရိုးထဲမှာ ကောင်းကောင်းတွယ်ဆက်နေတဲ့ implant ဟာပြန်မပြုတ်နိုင်ပါဘူး အရိုးအခြေအနေမကောင်းရင် ဥပမာ ဆီးချိုရောဂါကို control မလုပ်နိုင်ရင်နဲ့ အဆင့်လွန်သွားဖုံးရောင်ရောဂါဖြစ်မယ်ဆိုရင် သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ရင် နောက်တခုက ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်ရင် ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာတော့ ရေရှည်မကောင်းနိုင်ပါဘူး
(၂) Implant စိုက် ပြီး MRI ရိုက်လို့ရပါသလား ? ဖြေ ရိုက်နိုင်ပါတယ် ဘယ်ဓာတ်မှန်မဆို ရိုက်နိုင်ပါတယ် လူကိုဘာအန္တရာယ်မှ မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး
(၃) Implant စိုက်ပြီး သွားသန့်ရှင်း ရေး ဘယ်လို လုပ် ရပါ သလဲ? ဖြေ ပုံမှန်သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်သလိုပဲ လုပ်ရပါမယ် သွားကြားပွတ်ကြိုးလေးတွေသုံးပေးရပါမယ် သွားမြစ်တုအစားထိုးဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူရပါမယ်
(၄) Implant စိုက်ရင် နာကျင် မှုရှိပါ သလား? ဖြေ ထုံဆေးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် မနာကျင်နိုင်ပါဘူး ထုံဆေးထိုးတာနဲ့ ထုံဆေးပြေတဲ့အချိန်မှာသာ အနည်းငယ်နာကျင်နိုင်ပါတယ် ဆေးကြိုသောက်ထားတဲ့အတွက် ထုံဆေးပြေတဲ့အခါနာကျင်မှုလျော့နည်းစေပါတယ်
(၅)Implant ကုန်ကျစရိတ် မည်မျှရှိပါသလဲ? ဖြေ ခန့်မှန်း korea made usd 1000 - 1500 ခန့် Switzarland made usd 2000 - 3000 ခန့် အရိုးတု အစားထိုးဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင် usd 500 ခန့် သွားတုကို ကိုရီးယား ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုပို့ပြီးလုပ်တဲ့အခါ usd 500 ခန့် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်
(၆) သွားနုတ်ပြီး ဘယ်လောက် အကြာမှာ Implant ပြန် စိုက်နိုင် ပါသလဲဆရာ? ဖြေ သွားနှုတ်ပြီးပြီးချင်းသော်လည်းကောင်း ၁ လမှ ၄ လအတွင်းသော်လည်းကောင်းပြန်စိုက်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် အချိန်ကြာသွားပေမဲ့လည်း အရိုးပမာဏလုံလုံလောက်လောက်ကျန်မယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေးစိုက်လို့ရပါတယ်
(၇)Implant တစ်ချောင်း ရဲ့သက်တမ်း ? ဖြေ မိမိခံတွင်းရဲ့အခြေအနေ သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှု အခြားရောဂါများရှိ မရှိ ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်
(၈)ကလေး တွေ မှာ Implant စိုက်လို့ရပါသလား ဖြေ သွားစိုက်ရမဲ့နေရာ၊ အခြားသွားတွေရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပါတယ် သာမာန်အားဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ် ကျော်ရင် implant စိုက်ဖို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် သွားမြစ်တုအထူးကုနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်
(၉)Implant ပြုလုပ်ပြီး ပုံမှန် သွားကျောက်ခြစ် လို့ရပါ သလား။ ဖြေ လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ၆ လတကြိမ်လောက်ပုံမှန်လုပ်သင့်ပါတယ်
(၁၀) Implant တစ်ချောင်းကို ဘာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါသလဲ ? ဖြေ Implant fixture လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်ရယ် အပေါ်က ကြွေသွားရယ် ယေဘုယျအားဖြင့် ၂ ပိုင်းရှိပါတယ်
implant အတွက်အမေးအများဆုံး မေးခွန်း များ (1)ဘယ်လို လူတွေ မှာ Implant စိုက်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးလဲ ဖြေ။ ဆီးချို ရောဂါ သည် တွေ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ရင် ဖြစ်ဖြစ်..အရိုးပွ ရောဂါ ရှိသူတွေ ..ပြင်းထန်နှုလုံး ရောဂါ ရှိသူတွေ ..သွားကောင်းကောင်းမတိုက်နိုင် သူတွေ အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး..L
(2) Implant ၄ ချောင်း အသုံးပြုပြီး အံကတ် တပ်ဆင် လို့ရပါသလား ဖြေ။ ရပါတယ်။ Implant4ချောင်း ပဲ အသုံးပြု ပြီး အောက်အံသွား ၁၄ ချောင်း ကို စိုက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြု Implant ရဲ့ အရည် အသွေးကောင်းမွန် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အံကပ်တပ်ဆင်ဖို့အတွက် implant ၂ ချောင်းကနေ ၄ ချောင်းပဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် သွားအသေစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ implant ၆ ချောင်းကနေ ၈ ချောင်းအထိလိုအပ်နိုင်ပါတယ် ဘယ်လိုသွားတုအမျိုးအစားစိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာကတော့ သွားမြစ်တုကျွမ်းကျင်ပါရဂူနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်
(3) Implant ကို ဘယ်လို လူတွေမှာ လုံးဝ မစိုက် သင့်ဘူးလဲ ဖြေ အရိုးပွ ရောဂါ ရှိလို့ပုံမှန်ဆေးသောက်နေရတဲ့သူတွေ ဆီးချို ရောဂါ ရှိတဲ့ သူတွေ ဆေးလိပ် အလွန် အကျွံသောက်သော သူတွေ ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုသ မှု ခံယူ ပြီး ၆ လ အတွင်း လုံးဝ မစိုက် သင့်ပါဘူး
(4)သွားညှိထားရင် Implant စိုက် လို့ရပါသလား Implant အရင် လုပ်မလား သွားအရင် ညှိ မလား ကို သက်ဆိုင် ရာ သွားညှိ အထူးကု နှင့် အတူ Implant ဆရာဝန် နှင့်ပါ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်
(5) ဘာလို့ ဈေးကြီးရသလဲ၊ ဖြေ။ နောက်ဆုံးပေါ် သွားစိုက်နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဈေးကြီးပါတယ် Titanium သတ္ထုနဲ့ ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ရှိပါတယ် နောက်ပြီး အဆင့်မီစက်ပစ္စည်းတွေ ကိရိယာတွေအသုံးပြုရတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အနည်းငယ်များရတာဖြစ်ပါတယ် (6) ချက်ချင်းဝါးလို့ စားလို့ ရသလား? ဖြေ။ Titanium implant နဲ့ မေးရိုးတွယ်ဆက်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုပါတယ်။ မိမိသွားနဲ့ မေးရိုးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး စားနိုင် ဝါးနိုင်မဲ့အချိန် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်တသက်လုံးဝါးနိုင်စားနိုင်ဖို့ပိုပြီးဦးစားပေးရပါမယ်။